Maxkamadda sare ee dalka oo ammar ku bixisay nin ka tirsanaan jiray ciidamada militariga in u bixiyo lacag dhan 30 milyan – The Voice of Northeastern Kenya
Maxkamadda sare ee dalka oo ammar ku bixisay nin ka tirsanaan jiray ciidamada militariga in u bixiyo lacag dhan 30 milyan
starfmke August 29, 2016
Maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa ay nin ka tirsanaan jiray ciidamada militariga dalka kaas oo hawlgab ka noqday ciidanka ku ammaartay in u bixiyo lacag dhan 30 milyan oo shillinka dalka ah oo u siinayo haweeney ahaan jirtay xaskiisa.
Ninkan oo sidoo kale ah ganacsade ayaa waxa ay maxkamadda ku ammartay in u bixiyo lacag intaas la eeg kadib marki ay xaskiisa oo ay wada joogen mudo dhan 23 sano ay kala tageen.
Haweeneyda garsooraha ka ahayd maxkamaddaas oo lagu magacaabo Justice Luka Kimaru ayaa waxa ay ninkan sidoo kale ku ammartay in u haweeneydaas u iibiyo guri kuyaala mid kamid ah xafadaha kala ah Runda, Lavington, Kileleshwa, Kilimani ama Karen.
Haweeneyda garsooraha ah ee dhageysaneysay kiiska ka dhanka ah ninkan ka soo hawlgalay ciidamada militariga dalka ayaa waxa ay sheegtay in u ninkan haweeneydaas kiiska ka dhanka ah maxkamadda keentay in u gurigaas u iibiyo mudo dhan 90 maalmood gudahood ama u ka doorbido in u siiyo 60 milyan oo shillinka dalka ah.
Ninkan iyo haweeneydan kala tagay ayaa waxa ay is guursadeen biisha march ee sanadki 1993-di waxana ay isku dhaleen 2 cunug oo kaliye.
Kiiskan ayaa soo jitamaayay tan iyo sanadki 2008-da xiligaas oo u xiriirka lamaanahan soo kala dhex galay mad madow waxana ay noolashooda inteeda badan ku soo qaaten xafada Runda ee magaaladatan Nairobi.
Haweeneydan ayaa waxa ay maxkamadda ka codsatay in iyada loo da’ayo in ay heysato carruurteeda iyado oo u aabahoodna aan laga hor istaagi doonin in u carruurtiisa arko waxa ay sidoo kale maxkamadda ka codsatay in lagu amro aabaha carruurteeda in u bixiyo lacagta schoolka ee carruurteeda ilaa iyo her jamacadeed.
← Madaxweyne Erdogan oo sheegay in hawlgaladda ka dhanka ah daacish ay sii socon doonan
Turxan bixinta lagu sameynaayo madaxa garsoorka dalka iyo kuxigenkiisa oo maanta bilaabatay →